Kambani timu | Zhongrong Technology Corporation Co., Ltd.
Mai Dai Shumei:Mumiriri weMutemo, CEO, Senior Injiniya, EMBA Master degree kubva kuTsinghua University, Bachelor degree kubva kuZhejiang University. Nhengo yepamusoro yeChina Mukadzi Bhizinesi rezvemabhizimusi, NPC nhume. Nyanzvi kubva kuHebei province Science Bureau Scientific budiriro inotonga nyanzvi bhangi. Kuva neyangu gumi nemimwe bvumidzwa patent uye zvitanhatu zvesayenzi budiriro. Chekutanga mugadziri we6 mvumo patent yeacetic acid inogadzira ethanol tekinoroji. Yakawana makumi maviri emunyika, mudunhu mubairo.
James Fang:US nyika yepamusoro inotungamira peturu mafuta munda, chiremba degree kubva kuCincinnati University, post-chiremba kubva kuUS Risk Manage Research Lab yeNational Environmental Protection Bureau. Yedu kambani mukuru musayendisiti uye general hunyanzvi mainjiniya. Akakunda 2008 “Science Achievement” Mubairo kubva kuUS Environment Protection Bureau. General mainjiniya anotarisira fekitori kuyedza mashandiro e fiber ethanol nzira yekugadzira dhizaini ne $ 66 mamirioni eUS mari yekudyara neinjiniya dhizaini & kugadzirwa kwehunyanzvi kwe90,000 ton fiber fiber ethanol yekugadzira yegore inodarika $ 200 mamirioni. Chiitiko uye zvinobudirira kutungamira kwepasi-kutyora R&D inosanganisira kuwedzera kwekushambadzira kugadzirwa kufambira mberi, dhizaini dhizaini, kuvaka injinjini, kuvhurwa kwechigadzirwa uye kushanda kwefekitori.
Mai Li Qiuyuan:Secretary for Board of Director, Director weR&D, Master degree reBiochemical kubva kuZhejiang University, mukuru injinjini. Asati atora nyanzvi, maneja weTangshan Pharmaceutical chirimwa, mutevedzeri wekugadzira maneja weanobatana techbio biology engineering ltd.
Mr. Yang Chunhui:mutevedzeri GM, maneja wekugadzira, bachelor degree remakemikari kubva kuTianjin University, mainjiniya. Asati atora mhizha yeTangshan Pharmaceutical antibiotic subsidiary, kuve mutariri wehunyanzvi hwemishonga.
Mr. Dai Shuzhong:Bhodhi reMutungamiriri, asati atora mutengesi wekutengesa weHebei solvent ltd. Fekitori director weTangshan Meiyuan Wine fekitori. Mutengesi wekutengesa weTangshan mweya unodziya moto zvinhu ltd.
Mai Yang Xiaoqing:GM Mubatsiri, Mudzidzisi wezvemari kudyara kukuru kubva kuYunivhesiti yeExeter, MBA kubva kuYunivhesiti yeOKC. Asati atora CEO, mukuru muongorori weGold Mind Investment Consultancy ltd.
Mr. Wang Tianshuang:General Injiniya, bachelor degree, mukuru injinjini. Asati atora nyanzvi, mutevedzeri wefekitori maneja weHebei Fengrun Fertilizer Plant, Fekitori maneja weLida Coal Plant, maneja wehunyanzvi weHebei Xuyang Chemical Group, mainjiniya weHebei solvent ltd.
Mr. Wu Chaoyong: Chiremba degree kubva kuChina Science Academy, director weR&D Center, innovation modhi yeHebei yesainzi bhizinesi
Mai Hu Caijing:bachelor yemakemikari akanaka kwazvo kubva kuZhengzhou Chiedza Viwanda Koreji, mukuru injinjini. Kuve nemakore makumi maviri 'ruzivo rwekutenga nekutengesa.
Vashandi Kudzidziswa: Zhongrong Enterprise Tsika uye Kukurukurirana
Vese vashandi kudzidziswa
Wese kuongororwa kwevashandi, kunodiwa pamusoro pe90 mapoinzi ezvese zita rebasa
2019 Zhongrong Technology Nguva Yemitambo Yemitambo